Tsy nisy fampihorohoroana rehefa nipoaka ny bus fitateram-bahoaka tany Stockholm
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy nisy fampihorohoroana rehefa nipoaka ny bus fitateram-bahoaka tany Stockholm
Ny alahady teo dia voalaza fa fanafihana mpampihorohoro voalohany no notaterina tany Stockholm, Suède. Nisy bus mpizahatany iray nipoaka rehefa tonga teo amin'ny tampon'ny fidirana amin'ny tionelina iray. Namakivaky ilay sakana ilay bus ary avy eo nipoaka.
Ny tanky etona teo ambony no nipoaka vokatr'izany.
Nisy vavolombelona iray nandefa tao amin'ny Twitter: “Tao anaty fiara teo akaikin'izy ireo izahay. Foana ny bisy. Notifirin'izy ireo ny fitaovana fampitandremana momba ny haavony, saingy tsy tsikaritr'izy ireo izany. ”
Tsy mpandeha tao anaty bus izy ireo tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza.
Tale jeneralin'ny Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam, fanambarana avy amin'ny toerana fianjerana ET 302